Ogaden News Agency (ONA) – Aasaaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO).
Aasaaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO).
Posted by ONA Admin	/ August 15, 2017
Hambalyo Hambalyo, Waxaan Hambalyo kal iyo laab ah u diraynaa dhamaan Shacabka Soomaalida Ogadenya ee geesiga ah gaar ahaan Madaxda iyo Xubnaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) iyo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) ee jiida hore ku sugan, sanad guuradii 33aad ee kasoo wareegtay aasaaskii Jabhada oo maanta 33 jirsatay.
Kaddib markii uu hoos u dhacay muuqaalkii siyaasadeed iyo dhaqankii halganeed ee Jabhaddii Xoreynta Soomaali galbeed (WSLF), ayaa waxaa milkiilaha qaddiyadda oo ah shacabka dulman usoo baxay muuqaal hor leh oo ah in la badbaadiyo halganka oo foodda la galay waji cusub oo khatartiisa leh, waxaana dareen laga simanyahay noqotay u howl galidda isbaddal lagu beegsado waxa la doonayo. Iyadoo taas laga duulayo ayaa la aasaasay Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya (JWXO) 15th August sannadkii 1984-kii oo markiiba u howl gashay in ay buuxiso kaalinta hoggaamineed ee shacabka Soomaalida Ogadenya.
JWXO oo muddo ku dhow lix sano dalka dibaddiisa ka wadday halgan siyaasadeed oo ay adduunweynaha kaga dhaadhicineyso qaddiyadda Ogaadeeniya iyo heerarkii ay soo martay waxay gudaha Ogaadeeniya gashay sannadkii 1990-kii kaddib markii ay soo bexeen ifafaalayow muujinaya in ay burbureyso dowladda mangistu, waxayna shirkii ku meel gaadhka ahaa ee ugu horreeyey ee ay ku yeelatay gudaha dalka ku go’aansatay in ay ka qayb gasho shirkii loogu magac daray shirweynaha nabadda iyo dimoqraadiyadda ee lagu qabtay magaalada addis ababa bishii July ee sannadkii 1991-kii laguna dhisay dowladdii ku meel gaadhka ahayd ee baddashay maamulkii Mangistu.
Intaas kaddib waxaa bishii January ee sannadkii 1992-kii magaalada Garbo ee gobolka Nogob lagu qabtay shirwenihii 1aad ee jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeeniya, waxaana lagu dhisay Gole Dhexe oo ka kooban 45 xubnood oo uu xoghaye guud u yahay Sheekh Ibraahim Cabdalla Muxamed, waxayna ka qaybgalayaasha shirkaas dhiirri galiyeen in laga qayb qaato dimoqraadiyadda ay Itoobiya ku baaqday inta ay daacad ka tahay.
Shirweynaha addis ababa waxaa lagu sixiixay axdi qarameed ay ku qanceen qodobadii ku qorraa ka qaybgalayaasha shirka yididiilo weynna galiyey ummadihii kusoo jirey halganka hubeysan ee muddada dheer soo jiitamayey. EPRDF oo ahayd ururkii ugu awooda roonaa ururradii dowladda ku meelgaadhka ah ku dhisay addis ababa lana doonayey in ay la timaaddo aragti siyaasadeed iyo mid maamul oo ay ka muuqato dabacsanaan iyo niyad wanaag ay ku qanci karaan dadyowgii ku hoos jiray maamulkii itoobiya ayaa u leexatay danaheeda gaarka ah, waxayna muddo yar kaddib lasoo baxday waji iyo dhaqan ka baddalan wixii laysla ogaa ee meesha la wada dhigtay, ugu horreyntiina waxa ay wax kama jiraan ka dhigtay Axdigii addis ababa:
1- Waxay hor istaagtay hay’adihii samafalka caalamiga ahaa ee doonayey in ay wax u qabtaan dadyowgii ay baabi’iyeen maamulladii hore ee dalka soo xukumi jiray.
2- Waxay boob ku billaabeen hantidii ay laheyd dowladda ee taallay xafiisyadii maamulka, iyagoo u raray xagga deegaankooda sida Cagafcagafyadii, Matoorradii biyaha, gaadiidkii wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo qalabkii xafiisyada ee maamulka dowladda.
3- Waxay gobollada dadkoodu dagganyihiin u leexiyeen mashaariicdii horumarineed iyo dib u dhis ee loogu tala galay dadyowgii uu sida gaarka ah dhibku ugasoo gaadhay maamulladii isdaba joogga ahaa ee uu mingistu ugu danbeeyey, mashaariicdaasoo ay ku deeqeen waddamo badan oo daneynayey isbaddalka ka dhacay itoobiya.
4- Waxay billaabeen in ay dadka suuqa ku toogtaan maxkamad la’aan iyagoo sabab ka dhiganaya waxyaabo aan sharciga waafaqsaneyn.
Arrimahaas aan soo sheegnay iyo kuwo kale oo badan oo ay EPRDF ku tallaabsatay waxa ay nuxurka ka qaadeen axdigii lagu dhisay dowladdii kala guurka ahayd ee mellas zenawi madaxda ka ahaa, waxaana si degdeg ah isu baddalay dareenkii shucuubta ee ku aaddanaa axdi qarameedkaas.
JWXO oo muujineysa dulqaad siyaasadeed waxay indhaha ka laabatay dhammaan xadgudubyadaas aan soo sheegnay si ay u hanato dareenka shacabkeeda oo qaar badan oo ka mid ah dhagaha looga buuxiyey waxyaabo runta ka fog, arrintaasuna waxay kalliftay in ay jabhaddu xaqiijiso laba qodob oo muhiim ah iyadoo waliba hor istaagyo badan kala kulmeysay dhinaca hogganka sare ee TPLF, waxayna labadaas qodob kala ahaayeen: waa kan horee waxay ku guuleysteen hirgalintii iyo meel marintii ololihii doorashada. Iyo qodobka labaad oo ahaa dhismihii baarlamaannada heer qoomiyadeed iyo heer deegaan.
EPRDF oo u arkeysay ku guuleysashada ONLF ee labadaas qodob ee aan soo sheegnay in ay tahay arrin ka hor imaaneysa maslaxadeeda gaarka ah waxay intii awooddeeda ah ku dadaashay in ay minjo xaabiso maamulkii baarlamaanka qoomiyadda soomaalida ee ay jabhaddu hoggaamineysay, arrintaasuna waxay saldhig u noqotay is faham la’aan dhex marta maamulkii qowmiyadda iyo golahii wakiillada dowladda dhexe ee ay awooddiisa hayeen Melles iyo kooxdiisa.
Markii ay soo dhowaatay taariikhdii ay ku ekeyd sharciyaddii maamul ee dowladdii kala guurka ahayd, ururradii sida sharciga ah u diwaan gashanaana ay u caddaatay in ayna shucuubtoodu helin xuquuqdii uu u ballanqaaday axdi qarameedkii addis ababa ayaa ururradu waxay gudagaleen in ay u gudbiyaan golihii wakiillada ee dowladdii ku meelgaadhka ahayd barnaamijkooda siyaasiga ah ee ku aaddanaa aaya ka talinta shucuubtooda.
JWXO iyadoo taas ka duuleysa ayey dowladdii dhexe ee itoobiya u gudbisay aragtideeda ku aaddan aayaha shacabkeeda, waxayna codsatay in laga qaado afti si ay u muujiyaan rabitaankooda maadaama ay tahay fursad maanta la gudboon. Dhanka kale baarlamaanka Soomaalida Ogadenya ayaa shirkiisii magaalada Jigjiga ee horraantii sannadkii 1994-kii ku ansixiyey in afti laga qaado shacabka Soomaalida Ogadenya ee Itoobiya gumeysato.
Waxay JWXO u arkeysay codsigeeda in uu saxanyahay kol haddii ay EPRDF iska dardartay xuquuqdii uu ballan qaaday axdigii lagu dhisay dowladdii dhexe ee qoomiyadaha badnayd. Dhammaadkii shirkii baarlamaanka Soomaalida Ogadenya ee Jigjiga lagu qabtay isagoo aan lagu kala ambabixin EPRDF waxay 22-dii February sannadkii 1994-kii weerar ku qaadday guddoomiyihii jabhadda JWXO Sh.Ibraahim Cabdalla Muxamed oo socdaal ku joogay magaalada Wardheer iyagoo doonayey in ay qabtaan hase yeeshee waxaa dagaal difaac ah oo gacmaha laysla galay kala hor tagay shacabkii Wardheer oo ay taageerayaan cutub yar oo ka tirsan Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO).
Dagaalkaas oo ay ku naf waayeen tiro ka badan 50 qof oo reer wardheer ah wuxuu ahaa mid ayna u kala hadhin yar iyo weyn dadka magaaladu, taasina waxay argagax iyo filanwaa ku noqotay ciidankii gumeysiga ee halkaas joogay oo dagaalkaas ku waayey in ka badan boqol askari, waxaana halkaas ku fashilmay isku daygii ciidanka EPRDF ee ahaa qabashada Gudoomiye Sh. Ibraahim iyadoo ay badbaadday sharaftii shacabka Soomaalida Ogadenya. Weerarkan oo dhacay kaddib markii uu soo baxay go’aankii baarlamaanka waxa uu la mid yahay weerarkii birqod ee dhacay 21st January sannadkii 1992-kii maalmo uun kaddib shirkii garbo ee lagu dhisay hoggaanka JWXO.
Guul darradii wardheer intii kadanbeysay EPRDF waxay billowday in ay kulamo kala duwan kula yeelato magaalooyinka Addis Ababa, Harar, Qabridahar iyo Godey qaar ka mid ah qaybaha bulshada, kulamadaas oo ay uga gol lahayd in ay ku ogaato aragtida dadweynaha ee ku aaddan go’aannada JWXO iyo baarlamaanka. Meles Zinawi oo ay usoo baxday inaan loo xiiso qabin aragtidiisa ayaa weerar ku qaaday xarumaha JWXO ee ku yaalay gudaha dalka.
Weerarkii EPRDF Kaddib shir uu isugu yimid hoggaanka sare ee JWXO 20th April sannadkii 1994-kii wuxuu ku dhawaaqay in ay JWXO halgan hubeysan la galeyso ciidanka Gumaysiga Itoobiya ee ay horseedka u yihiin qowmiyadda tirada yar ee tigreega ee aan caddaaladda, dimoqraadiyadda iyo nabad ku wada noolaanshaha midna garaneynin.
Wixii ka dambeeyay wakhtigaas waxay JWXO hormuud iyo ilays u noqotay dhamaan jabhadaha hubaysan ee halganka adag kula jira taliska Woyaanaha. JWXO waxay noqotay jabhadii ugu horaysay ee u babac halganka gobanimadoonka ah ee shacabka Soomaalida Ogadenya. Waxaa kale oo JWXO ay horseed u noqotay inay midayso dhamaan ururada mucaaridka Itoobiya ee ka hawlgala dal iyo dibadba.
Taliska Woyaanaha ayay ku noqotay filansho waa Midtidnimada, Mayal Adayga, Geesinimada, iyo rabitaanka Shacabka Soomaalida Ogadenya. Shucuubta kale ee ku hoos dulman taliska Woyaanaha ayaa ku dhiiraday inay si badhaadh ah uga hor yimaadaan taliska Woyaanaha iyagoo ku dayanaya shacabka soo majeestaha ah ee Soomaalida Ogadenya.
JWXO waxay kaga dhabaysay hirgalinta shacabkeeda waxayna soo gaadhsiisay halgankii gobanimadoonka Soomaalida Ogadenya meel aad u wanaagsan oo lagu naaloon karo. Kooxda TPLF waxay ku qasbanaatay inay hor fadhiisato Madaxda JWXO, waxay ogolaatay inay tanaasulaad badan sameeyaan taas oo ay sandulle kaga dhigtay JWXO. Heer waxay maraysaa TPLF ay ku ladi la’yihiin guryohooda kadib markii ay qawmiyadihii kale ee Itoobiya cashiro dhaxalgal ah ka barteen shacabka Soomaalida Ogadenya ee geesiga ah.